China Game Headset Neck-style Bluetooth NV-8118 mpanamboatra sy mpamatsy | YIWU
Lalao Headset Neck-style Bluetooth NV-8118
Use fotoana 4 ora,
Loko mena, manga, mainty ,volamena
Fotoana hijerena 120 ora
Lavorary sy SNUG FIT PERFECT ho an'ny fiasa:Famolavolana ergonomika misy kofehin-tsolika silipo 3 isan-karazany dia miantoka ny mety indrindra ho an'ny sofinao. Ny volavolan-tsofina amin'ny sofina dia manome fika azo antoka ka hahatonga azy io ho namana tonga lafatra amin'ny hazakazaka, jogging na gym. Namboarinay tamim-pitandremana ireo earbuds ireo mba handefasana feo mahay mandanjalanja miaraka amin'ny bas matanjaka ary fanamafisana ny mids sy ny avo. Fanamarihana: raha mitady bas mahery matanjaka ianao dia mety te hijery telefaona lehibe kokoa.
Fifehezana an-tsipika MULTI-Functional:Ny fanaraha-maso an-tsipika tafiditra ao dia afaka mifehy ny fanitsiana ny habetsahana, ny famindrana hira, ny famaliana antso, ny fandavana ny antso, ny fampiatoana ny antso, ny playback Bluetooth, ny famerenana amin'ny laoniny, ny bitsika amin'ny feo, ny fifandraisana Bluetooth, ny fampiroboroboana ny bateria, ny fikatonan'ny saina, ny filalaovana ny karatra TF.
Azo mivalona:Volavola farany, ny vozona dia azo aforitra rehefa tsy ampiasaina, fampandrenesana mihetsiketsika. Aforeto amin'ny lafiny roa ho mora entina. Fampandrenesana mihetsiketsika antso mba hahafahanao misoroka ireo antso tsy tonga rehefa tsy eo an-tsofinao ny tadin-tsofina.
MIC BUILT-IN MIKASIKA NY CALLS MAZAVA:Ny mikrô namboarina dia manome anao feo madio toy ny an-tariby mandritra ny antso, na inona na inona antso an-tariby na antso VOIP. Afaka mandray antso mora foana ianao isaky ny any amin'ny gym na mandeha amin'ny arabe.
Fifanarahana midadasika:Ny jack jack nopetahany volamena 3,5 mm dia mety amin'ny fifandraisana audio ary manome antoka fa hiparitaka tsy misy fanodikodinana ny feo. Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana mandeha 3.5mm toy ny: iPhone, fitaovana Android, telefaona finday, MP3, MP4, Mac, laptop, tablette, solosaina birao, mpilalao mozika azo entina.
Tsy tantera-drano :Ny Wireless Wireless Earbuds dia tsy misy hatsembohana, tsy tantera-drano ary tsy misy orana, tena mety amin'ny hazakazaka, fitsangantsanganana, fitsangatsanganana, fitsangatsanganana sns.
Earphone 1 x
1 x tariby famandrihana USB,
Teo aloha: Headset Head-mount Bluetooth Multi-function NV-8125
Manaraka: Bluetooth Speaker 2.1 Channel NV-8945
Headphones tsy misy tariby
Headset Bluetooth Head-nitaingina NV-8109
Headset Bluetooth Head-nitazona sofina saka NV-8107
Headset Head-nitaingina Bluetooth Multi-function N ...
Headset Bluetooth Head-mount LED-Light NV-8129
Bluetooth Headset Head-mitaingina Long Standby NV ...
Headphones Bluetooth Miaraka amin'i Mic, Headset maimaim-poana amin'ny tanana, Headset Miaraka amin'i Mic, Cable Charger an'ny telefaona, Apple Car Charger, Earphones tsy misy tariby,